Nguwuphi umthombo? Izixhobo ezi-3 zokuchonga iifonti ezikwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kokukhe ukhangela i-Intanethi kwaye ubone iposta, iphepha lewebhu, ikhava okanye into ethe yatsala umdla ngenxa yefonti esetyenziswe ngumyili wayo. Uye wazibuza ukuba ngowuphi umthombo wokuyifumana.
Mhlawumbi kwenzeke into efanayo kuwe esitratweni, apho ubone khona into ocinga ukuba ingayilungela loo projekthi uyimisileyo, okanye ukuba nayo kwingxelo yakho yemithombo kuba inokusetyenziselwa okuninzi. Kodwa, Uyichonga njani ifonti kwi-Intanethi kwaye uyazi ukuba loluphi uhlobo lwefonti eyiyo? Sukuba nexhala, namhlanje sithetha ngale nto.
1 Uhlobo: umhlaba ngoku kulula ukuwuchonga
2 Izixhobo zokuchonga iifonti ezikwi-intanethi
2.1 Yintoni ifonti
2.2 Isixhobo seFontFont
2.3 Iifonti zam
2.4 I-BONUS: Imisebenzi eprintiweyo yeBowfin
3 Ndinomthombo, yintoni ngoku?
Uhlobo: umhlaba ngoku kulula ukuwuchonga
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa iifonti zaqala ukukhula, ubukhulu becala ngenxa yoyilo oluninzi olwenze ukuba indalo yabo ifumaneke kubasebenzisi, nokuba simahla okanye sihlawulelwe, inani leefonti ebesiliphindaphinda, liphindaphindwe kathathu kwaye kuninzi kude kube namhlanje kukho amakhulu amawaka yemithombo eyahlukeneyo.
Ngesi sizathu, xa sifumana enye kuyilo (ipowusta, ibhena, ikhava ...) asinakukwazi ngokuqinisekileyo, nkqu neengcali ezisebenza ngemigca yonke imihla, yeyiphi ifonti. Kunzima kakhulu.
Ngaphambili, bekungekho zixhobo ngaphandle kokubhala kule webhusayithi apho intengiso ibikhona kwaye ngokuzithoba uyicela ukuba inxibelelane nomyili ukumbuza ukuba yeyiphi ifonti ayisebenzisileyo. Kodwa ngoku izinto zitshintshile kwaye kukho izixhobo ezininzi ezinokukunceda uchonge ukuba yeyiphi na ifonti nokuba kukuxelele ukuba ungayikhuphela phi.
Izixhobo zokuchonga iifonti ezikwi-intanethi
Ngokuqinisekileyo ngoku uyazibuza ukuba zeziphi ezi zixhobo onokuzisebenzisa ukuze ufumanise ukuba ngowuphi umthombo othe phithi yiyo kwaye awunakufumana ndawo, akunjalo? Ewe, asenzi ukuba ulinde ixesha elide. Ezi zezona sizicebisa kakhulu:
Le yeyona nto yaziwa kakhulu kwaye iyintandokazi kwabaninzi kuba ayisebenzi kuphela ekuchongeni ubuchwephesha kwi-intanethi; kodwa ungenza okufanayo nakwinto oyibonayo ngaphandle kweintanethi, oko kukuthi, esitratweni, kwiimagazini ezibonakalayo, iiposta ... Into oyifunayo kukuthatha ifoto kufutshane kangangoko ileta kunye nomgangatho ukuyifaka .
Ngamaxesha amaninzi iya kukucela ukuba uchonge ezinye iileta, ukuze kungabikho ngxaki kwaye ekugqibeleni iya kukunika uluhlu lweefonti ezinokuthi zisetyenziswe. Inyathelo lokugqibela kukuba unokukhetha eyona ifanayo (kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ubone ukuba ihlawulwe okanye ayihlawulwanga, ukuba ungayisebenzisela ukuthengisa okanye hayi ...).
Enye into encomekayo ngesi sixhobo kukuba inedathabheyisi ebanzi kakhulu, ke kulula ukuba ufumane ukuba ngowuphi umthombo olapha kunezinye izixhobo.
Zombini isicelo kunye newebhu (WhatFont). Sigxile kwisicelo sewebhu kuba, ukuba uyikhuphele kwaye uyifaka kwisikhangeli, awuzukuya kwiwebhu ukuze uchonge ukuba yeyiphi imvelaphi, kodwa Iya "kukuxelela" kuwe kwisikhangeli sakho ngaxeshanye ukuba uzulazule kwiphepha olikuyo.
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye, njengangaphambili, ikwanaso nesiseko esihle.
Esinye isixhobo onokuwusebenzisa ukufumana ukuba yeyiphi ifonti egcina uvukile ziiFonti yam. Iwebhusayithi eyaziwayo ukukhuphela iifonti kunokuzichonga, kodwa enyanisweni kunokwenzeka ukuba ukwenze oko.
Ukwenza oku, sebenzisa inkqubo efanayo nokhetho lokuqala esikunike lona, ​​oko kukuthi, kuya kufuneka uthathe ifoto kuloo mthombo kwaye uyilayishe kwiseva abanayo. Iyakuyihlalutya kwaye ikunike uluhlu lwemithombo efanayo kakhulu, okanye efanayo, zombini ihlawulwe kwaye isimahla, ukuze ube nokuyifumana. Kwiimeko ezininzi, Iya kuba yi-100% ichanekile, kodwa kwabanye yimithombo "yabucala" ngakumbi, nangona unokuba nayo efanayo.
I-BONUS: Imisebenzi eprintiweyo yeBowfin
Ukuba ungachitha ixesha elininzi uchonga uhlobo lochwethezo, kwaye uyayidinga leyo ikunika i-100%, okanye ngokusondele kangangoko, uhlobo lohlobo abalusebenzisileyo, sisixhobo sakho esi.
Kubungcali ngakumbi, kwaye ke kunzima ukusebenzisa kuba iyakukucela iinkcukacha ezininzi zomthombo, ayisiyonyani yokufaka ifoto kwaye ndikuxelele ukuba ungowuphi umthombo. Apha uya kufuna ukuba umxelele ukuba unjani unobumba ngamnye, amagophe, ukukhula kunye nezinye iinkcukacha ezinokuthi zichongwe kuphela ngoonobumba.
Kodwa ngenxa yeso sizathu siyacebisa, kuba yeyona ikhethekileyo inolwazi oluninzi kunye nezixhobo ezongezelelweyo zokufumana, nangayiphi na indlela, uhlobo lwefonti "ethandileyo" nawe.
Ndinomthombo, yintoni ngoku?
Ukuba kukho naziphi na izixhobo esizishiyileyo ozisebenzisileyo zilungile, kodwa wakube ufumene ukuba loluphi na umthombo, Kuya kufuneka ukhumbule ukuba unokufumana iingcinga ezininzi. Phakathi kwazo kukho:
Ukuba ifonti oyichongileyo isimahla, oko kukuthi, ungayisebenzisa kwaye ungabinangxaki ekusebenziseni kwayo ukuba kungorhwebo okanye ubuqu. Oku kuhlala kungenjalo, kodwa kunokwenzeka.
Ukuba ifonti isimahla, kodwa hayi eyokusetyenziselwa urhwebo. Oko kuthetha ukuba ungayisebenzisa kwinqanaba lomntu, kodwa hayi ngentengiso, ngaphandle kokuba unxibelelana nomdali wayo kwaye ucele imvume okanye uhlawule ukuyisebenzisa ngale ndlela.
Uhlobo lohlobo lwentlawulo. Olunye ukhetho, ukuba uhlobo lohlobo oluthandileyo yileta ekufuneka uyihlawule ukuyisebenzisa. Kodwa ungakhathazeki, oko akusoloko kuthetha ukuba kuzakubiza imali eninzi; kodwa maninzi amaxabiso. Ke, unokuba nayo yonke into ukusuka kwixabiso eliphantsi ukuya kwabanye, ewe, baya kukwenza ukhethe imithombo efanayo.
Ngaphandle kwayo yonke into, kuyilo okanye nawuphina umntu osebenzela iifonti kubaluleke kakhulu ukuba uneentlobo ngeentlobo zazo, kwaye ezi zixhobo zinokukunceda ekuchongeni nasekuzifumaneni iifonti ozifumanisa ziluncedo.
Ngaba uyazi ngakumbi izixhobo zokuchonga ifonti ukwazi ukuba yeyiphi ifonti? Ngaba ungasixelela esinye sazo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Nguwuphi umthombo? Izixhobo ezi-3 zokuchonga iifonti ezikwi-intanethi
UOscar Rodriguez sitsho
Ukugqwesa, enkosi bendiyidinga.
Phendula uOscar Rodriguez
Uyenza njani iithonjana zeYouTube kwiCanva